Indaba yezinganekwane yiyokuqala ukujwayele nezwe lanoma yimuphi umuntu. Kuyiqiniso, nakuba ngezinye izikhathi izindaba eziyiqiniso, ulwazi lomphakathi nemithetho yayo iqala. Kusencane, satshelwa ukuthi zijabulisa izindaba ezithwala ulwazi mayelana nokuhle nokuthembeka, mayelana nokuphepha nothando. Ngesikhathi futhi ngubani owasungula inganekwane yokuqala engaziwa, kwaziwa kuphela ukuthi bonke abantu bomhlaba banezindaba zabo kanye nezindatshana ezidluliselwa emlonyeni kuya emlonyeni, kusukela ezizukulwaneni kuya ezizukulwaneni - izindabakwane.
Ukukhathalela okusebenzayo kulolu hlobo lobuciko ezweni lethu kwabonakala kuphela ngekhulu le-19. U-Alexander Afanasyev waqoqa amathekisthi kanye nezinganekwane zaseRussia ekuqoqweni. Amathekisthi abantu baseRussia ahlanganisiwe futhi ashicilelwe ngezici ezingu-8. Ngokwehluleka, kufanele futhi kuthiwe ngomsebenzi omkhulu owenzelwe ukuhlelwa kabusha nokuhlehlisa ulwazi oluqoqiwe ensimini enkulu. U-Afanasyev wanikeza izindaba eziningi ngamazwana. Lo msebenzi wathola izibuyekezo ezingathandeki, okuholela ekuvinjisweni kwezindaba ezithile ngokucwaninga. Lolu hlobo lwaphinda lwaphinda luphindwe izikhathi ezingu-25.
Amageyimu wezinganekwane zaseRussia ngokuvamile anezithombe zezilwane ezikwazi ukukhuluma nokusiza protagonist. Uhlu lwezinsikazi, amabhere, izimpungushe, izimpisi, amakati namakati. Izithombe zabantu zimelelwa owesifazane nomkhulu, u-Ivan noMariya. Indima ebalulekile edlala ubuhle baseRussia u-Elena noma uVasilisa Lovely, izimpawu zokuhlakanipha.
Uma uhlela izinto ezincane zezinganekwane zabantu baseRussia, ungaphetha ngemibono nemigomo esemqoka umphakathi ozama ukuxoxa ngayo ngokusebenzisa ubuciko bomlomo womlomo. Zilula, zicacile futhi zifinyeleleka. Kukholelwa ukuthi kungenxa yalesi sizathu ukuthi izindaba ezingumlando zithandwa kalula yizingane.
Ngemuva kokuhlaziya okuqukethwe okufingqiwe kwezinganekwane zaseRussia, umuntu angaphetha ngokuthi kungenzeka ngendlela elula yokwazi impilo kanye nendlela yomphakathi omdala, ukukhuluma ngokukhululekile, ukufunda umlando (njengeyisayensi) efomeni layo lokuqala, ukwakha umqondo wokuthanda izwe, ukufaka uthando ezindaweni zokuzalwa. Inendima ebalulekile idlala ngokucacile okubaluleke kakhulu kokubalulekile, ngenxa yalokho, abafundi baqeqeshwa ngokunemba, ngenkuthalo, ngokuzikhandla.
Ukuhlaziya okuqukethwe okufingqiwe kwezinganekwane zaseRussia, umuntu angathola umbono wamasiko abantu, isidingo sokuhlonipha abadala nokuvikela abanye. Indima ebalulekile idlala ngokuhlanganisa umlaleli onamaqhawe angakwazi ukugijimela ekuhlanguleni, abonise isibindi, ubuhlakani nokuhlakanipha. Ngaphezu kwalokho, le ndaba ngokwayo yenza umuntu akhokhe inhlonipho kumlandisi, aqhubeke nokubekezela futhi ahlakulele ukucabanga.
Okuqukethwe okufushane kwezinganekwane zabantu baseRashiya kungagcwaliswa ngaphansi kokuqonda okuyisisekelo kwengqondo eyinhloko, ingqondo yeRashiya: ukufeza umgomo, zonke izindlela zilungile, into esemqoka, umgomo kufanele ube kahle, omuhle.
Ngezinganekwane, sifundisa futhi sifundise izingane zethu. Kuye kwaqalwa inani lamasu elivumela ukuthi umuntu abe nomthelela kumlaleli ngokumtshela mayelana nokuphila okuphakade nokuhle.
UHerbert Wells. "Umuntu ongabonakali." Isifinyezo
Futhi niyazi ukuthi ukunamathisela ifilimu ocingweni?
Entwasahlobo ngamunye - chafer. Indlela imilenze eziningi ibhungane nalokho ziberegiselwa?
Ukukhishwa kwemoto: i-aristocratism ekwakhiweni kwangaphakathi
Izintambo zikagesi ezisobala ze-Outdoor e indlu yamapulangwe: ukufakwa, izintambo futhi izinto